Umhlaba wasemakhaya ufana nemayini yegolide, kuloba uNtokozo Biyela - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Umhlaba wasemakhaya ufana nemayini yegolide, kuloba uNtokozo Biyela
NAMHLANJE ngithanda sibheke indaba yokusetshenziswa komhlaba wasemakhaya, ikakhulukazi ngabantu abamnyama.
Ngesonto elidlule bengiyoqeqesha izisebenzi kwenye indawo yokulala evulwe kwelinye lamadolobha amancane KwaZulu-Natali.
Lena yindawo kanokusho. Nokho okungidumazile wukuthi le ndawo enhle kangaka futhi eseduze nomfula ogeleza uze uyozilahla olwandle iphethwe ngabelungu, hhayi abantu bakithi, okungabanikazi bayo. Cha, hhayi ngoba beyintshontshile. Kwaba nesivumelwano nenduna yendawo ukuthi laba belungu bangayisebenzisa le ndawo bese bekhokha intela ethize ngokuyisebenzisa.
Ubuhle bale ndawo sebugqama kakhulu ngoba nakhu sekwakhiwe isithabathaba sendawo yokulala yomntakabani. Uyabona nje ukuthi kule ndawo kufakwe imali eshisiwe ukuze ibe sezingeni lomhlaba. Ngithe-ke uma ngibuza iningi labantu bakithi abamnyama asebesebenza kule ndawo ukuthi kodwa bake babubona ubuhle kule ndawo, iningi laphawula ngokuthi lona lalizibonela amadlelo nje okudla izinkomo zawo, umfula ogelezayo yilapho izinkomo beziziphuzela khona amanzi.
Angibasoli-ke nokho ngoba empeleni uma ungakaze empilweni yakho uphumele ngaphandle kwendawo owazalelwa kuyona, kulukhuni ukubona ubuhle bendawo ngaphandle kwaloku oyazela kona.
Kuthe-ke sekufika abatshalimali babelungu bafika babona imayini yegolide kule ndawo, base betshala imali eshisiwe bakha isiqiwi esinezilwane zasendle lezi ezaziwa nge-Big 5. Esiqiwini sekukhona imikhombe, izinyamazane, amadube, izindlulamithi, izinyala kanti isezinhlelweni zokuletha amabhubesi ukuze ibe ngesinye seziqiwi ezivelele KwaZulu-Natali. Indawo yokulala yakhiwe phezu kwetshe eliqhwakele phezu kwentaba, ungafunga ukuthi usezulwini elincane.
Ngizwe ngamahemuhemu ukuthi emva kokuthi induna yendawo isivumelene nabatshalimali ukuthi bakhe lesi siqiwi nendawo yokulala kuke kwaba khona abasusa umsindo bethi bazoyifaka umlilo nezilwane bazozibulala.
Nanku-ke umbuzo wami. Yini ndaba kuthi njalo uma sekukhona intuthuko eletha imisebenzi endaweni ebikade ingenamsebenzi noma intuthuko bese kuba khona ongoma uyayona esikhaleni? Yini lena eyenza ukuthi iningi labantu bakithi abamnyama lingabuboni ubuhle bendawo elihlala kuyona buze bubonwe ngabokuhamba?
Asiyibeke eceleni indaba yemali yokuthuthukisa indawo. Kwayona isuke ingeyona inhlosongqangi yabantu bakuleyo ndawo kodwa kuyothi uma kukhona oseza nombono wokuyithuthukisa kuthi labo asebehlale iminyaka kuleyo ndawo bese befuna ukuphazamisa izinhlelo zokuletha intuthuko emphakathini, baxove izinto.
Ngiye ngiqaphele nokuthi esikhathini esiningi laba bantu basuke bedukiswe yilaba ababathembile ukuthi babahole. Isikhathi esiningi lezi zinkampani uma sezike zenza isivumelwano nabaholi bomphakathi ngokuqashwa kwabantu, ukwakha ingqalasizinda nokukhokha ingxenye yenzuzo eziyithola ngokusebenzisa umhlaba womphakathi, le mali isikhathi esiningi ayifinyeleli emphakathini. Iphelela kulaba baholi, ubone sebehamba ngezimoto ezibelethe amasondo emhlane kodwa intuthuko emphakathini ingabonwa.
Bathi uma bebuzwa, babike imbiba babike ibuzi. Bakhohlise umphakathi bathi abatshalimali abayikhokhi imali okwakuvunyelwene ngayo kanti wuhubhu lukabhejane lolo, imali iyakhokhwa inkinga nje iya eziswini zabaholi.
Empeleni akubona abatshalimali abangamaxoki, yilaba baholi esibathembile abanezinhliziyo ezingaphandle. Ukube beneqiniso, ngabe yiningi intuthuko emphakathini abayiholayo.
Ingabe yini inhloso yale ngosi yanamhlanje na? Iqonde khona yisekuthini asemaningi amathuba okwenza amabhizinisi ngokusebenzisa umhlaba omuhle esinawo emakhaya.
Okufanele sikwenze nje wukubona lobu buhle esihlala kubona, senze loku okubizwa nge-feasibility study, ucwaningo lokuthi okuhlelwayo endaweni kungachuma yini. Silandelise ngokuhlanganisa uhlaka lwebhizinisi bese sithungatha abatshalimali.
Akusizi ukuthi sibhoke sikhahlele sithi abatshalimali abakwazi ukuletha intuthuko ezosiza abantu bakithi abantula imisebenzi kodwa sibe singeke sabenzela lutho kwathina abantu bakithi.
Isikhathi esikusona siyaphoqa ukuthi sivule imiqondo yethu, sibone ubuhle bomhlaba esihlala kuwona, siwusebenzise ngendlela efanele ngaphandle kokwazi ukuthi umhlaba wamakhosi wumhlaba wamadlelo ezinkomo.
UBiyela ungumeluleki wamabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe, iMindset Shift Consulting
KUNTWELA ezansi kogcine ekhalela kwezolimo ngoba engawutholi umsebenzi awufundele. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
Asiqhubeke sibambisane ekugomeleni iCOVID-19 ukuze sizovuselela umnotho wethu, kuloba uBusi Mavuso